Bible Mu Nsɛm Nea Enti a Mose Guanee - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HWƐ Mose a ɔreguan afi Misraim. Wuhu mmarima a wodi n’akyi no? Wunim nea enti a wɔpɛ sɛ wokum Mose no? Ma yɛnhwɛ sɛ yebetumi ahu.
Mose nyinii wɔ Farao, Misraim hene, fie. Ɔbɛyɛɛ onyansafo ne onipa kɛse. Ná Mose nim sɛ ɔnyɛ Misrini, na mmom n’awofo ankasa yɛ Israelfo a wɔyɛ nkoa.
Da koro, bere a wadi mfe 40 no, Mose yɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ sɛnea ne nkurɔfo te. Ná sɛnea wɔreyɛ wɔn no yɛ awerɛhow. Ohuu Misrini a na ɔreboro Israelni. Mose hwɛe, na bere a ohui sɛ obiara nhwɛ wɔn no, ɔbɔɔ Misrini no, na Misrini no wui. Afei Mose de anhwea kataa no so.
Ade kyee no, Mose san kɔe sɛ ɔkɔhwɛ ne nkurɔfo bio. Osusuwii sɛ obetumi aboa wɔn na wɔanyɛ nkoa bio. Nanso Mose hui sɛ Israelfo baanu reko, enti ɔka kyerɛɛ nea n’asɛm nyɛ dɛ no sɛ: ‘Dɛn nti na woreboro wo nua?’
Ɔbarima no kae sɛ: ‘Hena na ɔde wo sii yɛn so hene ne temmufo? Wubekum me sɛnea wukum Misrini no?’
Afei ehu kaa Mose. Ohui sɛ nkurɔfo ahu ade a ɔde yɛɛ Misrini no. Farao mpo tee ho asɛm na ɔsomaa nnipa sɛ wonkokum Mose. Ɛno nti na na ɛsɛ sɛ Mose guan fi Misraim.
Bere a Mose fii Misraim no, ɔkɔɔ Midian asase so akyirikyiri. Ɛhɔ no ɔkɔtoo Yetro ne n’abusua, na ɔwaree ne mmabea no biako a wɔfrɛ no Sipora. Mose bɛyɛɛ oguanhwɛfo na ɔhwɛɛ Yetro nguan. Ɔtraa Midian asase so mfe 40. Na wadi mfe 80. Afei da koro, bere a ɔrehwɛ Yetro nguan no, anwonwade bi sii a ɛsakraa Mose asetra nyinaa. Yɛnhwɛ nea anwonwade yi yɛ.
Exodus 2:11-25; Asomafo Nnwuma 7:22-29.
Mose nyinii wɔ he, nanso dɛn na na onim wɔ n’awofo ho?
Bere a Mose dii mfe 40 no, dɛn na ɔyɛe?
Dɛn na Mose bisaa Israelni barima bi a na ɔreko, na mmuae bɛn na ɔbarima no de maa no?
Adɛn nti na Mose guan fii Misraim?
Ɛhe na Mose guan kɔe, na hena na ɔkɔtoo no wɔ hɔ?
Mose guan fii Misraim no, dɛn na ɔde mfe 40 a edi hɔ no yɛe?
Kenkan Exodus 2:11-25.
Ɛwom sɛ wɔde mfe pii kyerɛkyerɛɛ Mose Misrifo nyansa de, nanso dɛn na Mose de kyerɛe sɛ odii nokware maa Yehowa ne ne nkurɔfo? (Ex. 2:11, 12; Heb. 11:24)
Kenkan Asomafo Nnwuma 7:22-29.
Asuade bɛn na yenya fi Mose mmɔden a ɔbɔe sɛ nankasa begye Israel afi Misraim nkoasom mu no mu? (Aso. 7:23-25; 1 Pet. 5:6, 10)